प्रेम कथा: श्याम्पुको विज्ञापनबाट लगन गाँठोसम्म पुगे 'विरुष्का'
प्रेम कथा: श्याम्पुको विज्ञापनबाट लगन गाँठोसम्म पुगे ‘विरुष्का’
फागुन ०१, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
एजेन्सी – विराट कोहली र अनुष्का शर्मा जीवन साथी बनिसकेका छन्। उनीहरुले इटलीको फ्लोरेन्स सहरमा डेस्टिनेसन वेडिङ्ग गरेका थिए। उनीहरु दुवै जना दुल्हा-दुलहीको भेषमा धेरै सुन्दर देखेका थिए। विरुष्काका विवाह एक फेरी टेल वेडिङ्ग थियो। विराट र अनुष्काको तीन वर्षको पुरानो प्रेम अचानक विवाहमा परिणत भयो। उनका जोडीलाई विश्वभरबाट बधाई मिलेको थियो र सोसल मिडियामा उनका विवाहका तस्वीरहरु धेरै भाइरल भएको थियो। प्रत्येक युगल जोडीहरु उनका विवाहबाट प्रभावित भई उनीहरु जस्तै विवाह गर्ने सपना देख्न थालेका छन्।
कसरी क्रिकेट खेलको बादशाह विराट कोहली र बलिउड फिल्म क्षेत्रको क्वीन अनुष्का शर्मा प्रेममा परे र उनीहरुको प्रेम विवाहमा परिणत भयो , जान्न महत्वपूर्ण छ। बलिउडको ग्लोरियस डिवा अनुष्का र क्रिकेट मैदानका किंग विराटले जब एक-अर्कालाई भेटे र सुरु भयो प्रेम। अनुष्का र विराटको प्रेम कहानी कसैसँग पनि लुकेको छैन…चाहे त्यो क्रिकेटको दुनियामा होस् या बलिउडको दुनियामा होस्, उनीहरुले खुलेर आफ्नो प्रेम व्यक्त गरेका छन्। जब अनुष्का विराटको हरेक म्याचमा सहभागी हुन्छिन तब त्यहाँ एउटा छुट्टै संसारको नजर आउँछ। अहिले , भारतीय क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई)को तर्फबाट अनुष्काले विराटको आधिकारिक अतिथि दर्जा प्राप्त गरेकी छिन्। अष्ट्रेलिया, इंगल्यान्ड, श्रीलंका, वेस्ट इन्डिज आदि जुन देशमा म्याच भए पनि अनुष्का शर्मालाई विराट सँगै देखिन्छ।
विराट र अनुष्काको लभ स्टोरी धेरै पुरानो छैन। सन् २०१३ मा दुवैले एक विज्ञापन खेलेका थिए र त्यसपछि विराटले अनुष्कालाई मन पराउन थाले। त्यसपछि उनीहरुबीच मित्रता पनि बढ्दै गयो र भेटघाट पनि बाक्लिदै गयो। जब विराट र अनुष्का जताततै सँगै देख्न थाले तब मिडियाहरुमा नयाँ-नयाँ कहानीहरु आएका थिए जुन दुवैले स्वीकार गरेका थिएनन्। एक क्रिकेटर र बलिउड अभिनेत्रीबीचका सम्बन्ध बारे मानिसहरुले पनि रुचिका साथ समाचारहरु पढ्न थाले।
यो प्रेम कथा यति धेरै बढिरहेको थियो कि दिल्ली निवासी विराट मुम्बई निवासी बने। क्रिकेट मैदानबाट समय मिल्ना साथ विराट सिधा अनुष्काको घर पुग्थे। र समय मिल्ना साथ अनुष्का पनि सिधा विराट भएको ठाउँमा पुग्थिन। विराट र अनुष्काको प्रेममा दूरी किमार्थ स्वीकार्य थिएन। उनीहरुबीचको प्रेम कथा अघि त बढिरहेको थियो तर कसैले पनि प्रमाण पाएका थिएनन। सन् २०१४ को भ्यालेन्टाइन डेमा अनुष्का र विराट पहिलो पटक न्युजिल्यान्डमा एक साथ देखिएको तस्वीरले दुनियाभरका मानिसहरुलाई प्रमाणित गर्यो कि विराट-अनुष्का को डेटिङ्गको खबर झुट नभई सत्य हो।
केही समय पहिले विराट र अनुष्का एक ब्रान्डको लागि विज्ञापनमा खेलेका थिए। यस एडमा विराटले अनुष्कासँग सात वचन पूरा गर्ने कसम खाएको दृश्य देख्न सकिन्छ। जब त्यो विज्ञापन टिभीमा प्रसारण भयो, उनीहरुको विवाहको हल्लाले सामाजिक सञ्जाललाई तताएको थियो।
सन् २०१४ मा अनुष्का श्रीलंकामा आफ्नो फिल्म बम्बय भेल्भेटको लागि शुटिङ्ग गर्दै थिईन। र विराटलाई मिल्नका लागि उनले अनौठो बहाना बनाए। अनुष्काले निर्देशक अनुराग कश्यपलाई आफू आफ्नो कुकुर भेट्न मुम्बई जान्छु भनेकी थिईन। यदि उनी त्यो हप्ताको अन्त्यमा कुकुरलाई भेट्न गईन भने कुकुरले उनलाई बिर्सनेछ भनेकी थिईन। अनुष्कालाई बम्बय भेल्भेटबाट छुट्टी त मिल्यो तर अनुष्काको बहानाको सुनेर फिल्म सेटमा सबै हासेका थिए। अनुष्काको लागि कुकुर त सिर्फ बहाना थियो….वास्तविक उद्देश्य त विराटलाई भेट्न मुम्बईमा जानु थियो। विराट कोहलीलाई मिल्न अनुष्का शुटिङ्ग छाडेर भारत आईन र विराट पनि आफ्नो प्रेमिकालाई भेट्न पुगे श्रीलंका। विराट कोहली अनुष्कालाई भेट्न हरेक शुटिङ्ग डेस्टिनेसन पुगे। जाहे त्यो जोधपुर होस्, श्रीलंका होस् या फिर बार्सिलोना विराट कोहली र अनुष्का सँगै देखिए।
विराट कोहली र अनुष्का शर्माको तेज रफ्तारको प्रेम कहानीमा उनका साथीहरुले पनि मज्जा लिन चुकेनन्। ज-जसले देखे, उनीहरुले चटपटी लभ स्टोरीको मज्जा लिए। कहिले शाहरुखले आईपीएलको शोमा विराटलाई अनुष्काको नाम लिएर छेडछाड गरे त कहिले करण जौहरले कफीसँगै अनुष्काबाट धेरै रहस्यहरुको बारेमा जान्न चाहे। विराट र अनुष्का जहाँ-जहाँ पुगे….उनीहरुको लभ स्टोरी पनि सँगै आए। कमेडी नाइट्स विथ कपिलमा पनि अनुष्काको नाम लिएर विराटलाई छेडछाड गरे। यस लभ स्टोरीलाई प्रचारमा विराट कोहलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। विराटले हैदराबादमा हाफ सेन्चुरी र दुनियाको सबैभन्दा छिटो ६०००० रन स्कोर गरेर स्टेडियममा बसेकी अनुष्का शर्मालाई तालीको गडगडाहटमा फ्लाइंग किस दिए।
सन् २०१४ को डिसेम्बरको महिनामा विराट कोहली अष्ट्रेलियामा म्याच खेलिरहेका थिए…र त्यसै समय अनुष्का पनि पीके फिल्मको रिलिजको लागि पुगिन् मेलबर्न। विराटको साथ अष्ट्रेलियाको क्रिकेट मैदानमा देखिएको उनीहरुको रोमान्स त्यहाँ मात्र सिमित रहेन। उनीहरु कहिले डार्लिंग हार्बर त कहिले क्रूजमा सँगै रोमान्स गरेका देखिए। अष्ट्रेलियामा लगभग 20 दिनको लागि बसेका उनीहरुको प्रत्येक दिनको तस्वीरहरु मिडियामा आए।पछिल्लो चार वर्षबाट उनीहरुको लभ स्टोरीको चर्चा निरन्तर भईरहेको छ। एक पटक यस लभ स्टोरीमा ब्रेकअप पनि भएको थियो। सन् २०१६ मा करिब ६ महिनासम्म उनीहरु एक-अर्कासँग बोलेनन्। तर विराटले नम्र भएर अनुष्कालाई मनाउन सफल भएका थिए।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन ०१, २०७४१४:१८
आँखा झिम्काएरै रातरात इन्टरनेटमा तहल्का पिटेकी प्रियाले भाईरल भएसँगै दिईन् यस्तो प्रतिक्रिया !
कपिल शर्माले ट्विटरमार्फत यी अभिनेताको बारेमा दिए यस्तो जवाफ!
उमेरले ४० नाघिसके पनि यी चर्चित अभिनेत्रीको सकिएको छैन जवानी ! हेर्नुहोस् तस्विर सहित !
सलमान खान जेल जाँदा कपिल शर्मालाई आखिर के भयो ? कतै मानसिक सन्तुलन त गुमाएनन ?
जापानी सुन्दरीलाई शृंखलाले दिइन् बधाई, शृंखलालाई भोट गर्ने आज अन्तिम दिन!
आयुष्मानकी पुर्व प्रेमिका परमितालाई यी युवकले लगाईदिए औठी!